तातो पानीले नुहाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने १० कुरा – Karnalisandesh
तातो पानीले नुहाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने १० कुरा
प्रकाशित मितिः ५ माघ २०७७, सोमबार ०८:५८ January 18, 2021
काठमाडौँ। चिसो मौसम सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा विभिन्न परिवर्तन हुन थाल्छ। यतिबेला फ्लू र संक्रमण फैलने खतरा पनि निकै बढ्ने गर्छ। सायद यसै कारणले मानिसहरु यो मौसममा बढी नै बिरामी हुने गर्छन्। तात्तातो कफी, न्यानो कपडा, तातो पानी त यो मौसमको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता मानिन्छ । तर यी सबै कुरा हाम्रो शरीरका लागि कति हानिकारक हुन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ?
ढिलासम्म तातो पानीले नुहाउनु
विशेषज्ञलाई विश्वास गर्ने हो भने चिसो मौसममा अबेरसम्म तातो पानीले नुहाउनु राम्रो होइन। यसले हाम्रो शरीर र दिमाग दुबैमा नकारात्मक असर पार्छ। वास्तवमा तातो पानीमा केराटिन नामको स्किन सेल्सलाई ड्यामेज गर्छ जसका कारण छालामा एलर्जी, सुख्खापन र बिमिराको समस्या बढ्ने गर्छ।
असाध्यै धेरै कपडा लागाउनु
चिसो मौसममा आफूलाई न्यानो राख्नु राम्रो कुरा हो तर असाध्यै धेरै कपडा लगाउनबाट जोगिनुपर्छ। यस्तो गर्दा तपाईंको शरीर ओभर हिटिङको शिकार हुनसक्छ। वास्तवमा चिसो हुँदा हाम्रो प्रतिरोधी क्षमताले ह्वाइट ब्लड सेल्सको निर्माण गर्छ जसले संक्रमण र रोगबाट हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। जबकी शरीर ओभरहिट हुँदा प्रतिरोधी क्षमताले आफ्नो काम गर्न सक्दैन।
चिसो मौसममा मानिसको खान्की अचानक बढ्ने गर्छ र उनीहरु स्वास्थ्यको ख्याल नै नगरी जे पनि खान थाल्छन् । वास्तवमा, चिसो मौसममा शरीरको क्यालोरी बढि खर्च हुने गर्छ जसको भरपाई हामी चकलेट वा अतिरिक्त क्यालोरीयुक्त खानेकुराको सेवनमार्फत् गर्ने गर्छौं । यस्तोमा भोक लाग्दा फाइबरयुक्त सब्जी वा फलफूल मात्रै खानुपर्छ।
चिसो मौसममा चिया र कफीमार्फत् शरीरलाई तातो राख्नु एउटा राम्रो तरिका हो। तर, सायद तपाईंले बिर्सनुभएको होला कि अत्यधिक क्याफिन पनि शरीरका लागि हानिकारक छ। दिनभरी तपाईंले २ वा ३ कपभन्दा बढी कफी पिउनु हुँदैन।
चिसो मौसममा मानिसहरुलाई कम प्यास लाग्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि चिसो मौसममा शरीरलाई पानीको आवश्यकता पर्दैन। पिसाब फेर्दा, खाना पचाउँदा र पसिनामार्फत् पानी शरीरभन्दा बाहिर आउँछ। यस्तोमा पानी नपिएका कारण शरीर डिहाइड्रेट हुन थाल्छ। यसले मृगौला र पाचन प्रक्रियामा समस्या बढाउँछ।
सुत्नु अघि के गर्ने?
एक शोधका अनुसार राती सुत्नु अघि हात र खुट्टामा पञ्जा र मोजा लगाउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। निद्राको गुणस्तर सुधार्नका लागि यो तरिका निकै फाइदाजनक मानिएको छ।
यो मौसममा दिन छोटो र रात लामो हुन्छ। यस्तो दिनचर्याले सिर्काडियन साइकल डिस्टर्ब त हुन्छ नै शरीरमा मेटालोनिन हर्मोनको श्राव पनि बढ्ने गर्छ। जसका कारण चाँडै निद्रा लाग्छ र सुस्तता बढ्छ । त्यसैले आफूले दैनिक सुत्ने समयमा नै निद्रा पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्।
बाहिर जान अस्विकार
चिसो मौसममा धेरै मानिसहरु चिसोबाट बच्नका लागि घरबाट बाहिर निस्कन नै बन्द गरिदिन्छन्। यस्तो गर्नु स्वास्थ्यका लागि भारी पर्न सक्छ। घरभित्रै रहँदा तपाईंको शारीरिक क्रियाकलाप कम हुन्छ। मोटोपना बढ्छ र सूर्यको किरणबाट पाइने भिटामिन डीबाट पनि वञ्चित भइन्छ।
तापक्रम कम भएका कारण धेरैजसो मानिसहरु बेडभित्रै बस्न रुचाउँछन्। शारीरिक व्यायाम शून्य हुने भएकोले हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता सुस्त हुन थाल्छ। त्यसैले बेडभित्रै बसिरहनुको साटो साइक्लिङ गर्ने, हिँड्ने वा कुनै पनि वर्कआउट तत्काल सुरु गर्नुहोस्।
आफैं जान्ने भएर औषधीको सेवन
यो मौसममा धेरैजसो मानिसहरुलाई रुघा, खोकी, ज्वरोलगायतका समस्या देखिने गर्छ। यस्तोमा डाक्टरसँग उपचार नगराइ आफैंले औषधीको सेवन गर्नु घातक हुनसक्छ। यो कुनै गम्भीर रोगको लक्षण पनि हुनसक्छ। त्यसैले कुनै पनि औषधी वा तरिका अपनाउनु अघि डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।